IZINYOKANYOKA ZIBULALA IZINGANE EZINTATHU EMGUNGUNDLOVU | Scrolla Izindaba
IZINYOKANYOKA ZIBULALA IZINGANE EZINTATHU EMGUNGUNDLOVU
UErnest Dewa, uBuhlebuyeza Jili noGift Dlamini, abaphakathi kweminyaka eyisithupha kuya kweyisishiyagalombili, bebehlezi bebonakala bedlala ndawonye. Manje bahlanganiswe unomphela ukufa ngemuva kokushaywa izintambo zezinyokanyoka ngoMgqibelo.
Nakuba umphakathi wasemijondolo yaseJika Joe eMgungundlovu uvuma ukuthi amakhebuli afakwa yizinyoka ngokungemthetho, usola nomasipala ngale nhlekelele.
Umama kaGift, uSweleni Dlamini utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi useneminyaka eyi-13 ehlala kulo muzi futhi uyazi ukuthi impilo yabo isengcupheni nsuku zonke.
“Ukuhlala lapha kufana nokwamukela ukuthi ungashona noma yinini. Inhliziyo yami iphukile kepha angimangalanga. Ziningi izehlakalo lapho izinyoka zithatha khona izimpilo zabantu,” uyasho.
“Akukho okunye esingakwenza ngaphandle kokuxhuma ngokungemthetho ngoba kufanele sipheke siphile. Ukunxusa kwethu ugesi ophephile futhi osemthethweni kuwele ezindlebeni ezingezwa kuMasipala waseMsunduzi. Sikholwa wukuthi kuzolahleka izimpilo zabantu abaningi. ”
Umama kaErnest, uThabile Dewa uthe bafika bezohlala kulo muzi ngoba kuseduze nedolobha futhi bayakwazi ukuhamba ngezinyawo beya emsebenzini. Uthe le nhlekelele iza ngemuva kwenyanga nje belahlekelwe yizo zonke izimpahla zabo emlilweni.
“Asazi ukuthi senzenjani ngamalungiselelo omngcwabo. Ukube umasipala wasihlinzekela ngogesi kuphela ngabe asizingcwabi izingane zethu,” kusho uThabile.
Abazali base-Gatvol bathe bebehlale bazi ukuthi kungekudala kuzokwenzeka inhlekelele efana nalena njengoba umasipala uyishaya indiva uma kuziwa ekubhekaneni nezinkinga zikagesi endaweni yokuhlala futhi ngenxa yalokho abahlali baphendukela ekuxhumeni ugesi okungekho emthethweni.
Okhulumela umasipala waseMsunduzi uThobeka Mafumbatha uthe umasipala usezinhlelweni zokufaka ugesi yonke imijondolo kodwa okwamanje basafuna imali.
“Sinxusa imiphakathi ukuthi ingaxhumi ugesi ngokungekho emthethweni ngoba lokhu akuthinti kuphela umnotho wedolobha kepha kubulala nabantu,” uyasho.
Okhulumela amaphoyisa e-KZN uKaputeni uNqobile Gwala ukuqinisekisile ukuthi idokodo labaphenyi liphenywa ngamaphoyisa aseMgungundlovu.